मुलुकी दण्ड संहितामा चिकित्सकहरुको राजनीति — News of The World
आज : २०७६ बैशाख ५ गते
बैशाखमा पनि पहिरोको कहर, विद्यालय तथा सडकमा क्षति
बार्षिकरुपमा ४५ अर्ब बराबरको औषधि कारोवार
अन्तिममा कुवेतलाई पराजित गरेपनि बिश्वकपमा छनौट हुन सकेन नेपाल
पाकिस्तानमा बन्दुकधारीको आक्रमण, १४ यात्रुको मृत्यु
मुलुकी दण्ड संहितामा चिकित्सकहरुको राजनीति
पुष्पलाल पाण्डेभाद्र १८, २०७५
यो संहिता खाली त्यतिका लागि मात्र हो । चिकित्सक मीत्रहरु ! चोरको खुट्टो काट भन्दा अहिल्यै खुट्टा उचाल्न तिर कम्तिमा नलागौं । पेसागत मर्यादा कायम गरौं । काम बन्द गरेर आफूलाई जीवन दान दिने भगवान मान्ने सर्वसाधारणको समस्यालाई खिल्ली नउडाऔं ।
चिकित्सकहरुलाई आम विरामीले भगवान मान्छन् । यसको अर्थ भगवानले गल्ती गर्दैनन् भन्ने नै हो । तर, पछिल्लो समयमा बिरामीका भगवान बन्नुपर्ने चिकित्सकहरु व्यापारी भएका छन् । यसको अर्थ व्यापारीले गल्ती गर्न सक्छन् । गल्ती गर्दा सबै सजायको भागिदार बन्नुपर्छ । हामी गणतन्त्र नेपालका जनता कोहीपनि रैती होइनन् भन्ने ठान्छौं । यसकारण गल्ती गर्दा सबै पेसाका पेशाकर्मीहरुले कारबाहीको भागिदार बन्नु पर्ने तर, चिकित्सक भने कारबाहीको दायरबाट माथि रहनुपर्ने गरी गरिएको आन्दोलन सर्वथा चिकित्सकीय मर्यादा विपरित भएको पाइएको छ ।
हो, फौजदारी न्याय प्रणालीका विविध आयाममा छलफल चर्चा र बहस हुनुपर्दछ । विषयगत सरोकार राख्नेहरुले आफ्ना विषयहरु उठान गर्दै जानुपर्छ । यसो भयो भने मात्रै यावत सुधार सम्भव छ । तर, पछिल्लो समय यो देशमा बिरामीका भगवान बन्नुपर्नेमा अराजक क्रियाकलाप देखाउने कामहरु चिकित्सकहरुबाट हुँदै आएका छन् । आफ्ना माग राख्ने क्रममा अस्पताल बन्द गर्ने, आमसर्वसाधारण विरामीको हक कुन्ठित हुने गरी आन्दोलन गर्ने आदि काम कम्तिमा चिकित्सकहरुलाई सुहाउँदैन ।
डा. केसीको राजनीति
मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन भएर नयाँ संहिता (ऐन) आज एक्कासी केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनैले प्रिन्टरको बटन थिचेर धमाधम ल्याएजस्तो गरी चिकित्सकहरु प्रस्तुत भएका छन् । हाम्रा महान विद्धान चिकित्सक मित्रहरुलाई अवस्य थाहा छ यो संहिता विभिन्न आयोगले १० वर्ष लगाएर संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन् । अनि संसद्ले विभिन्न बुँदामा दफावार छलफल गरेर पारीत गरेको हो । यस संहितामा २०७४ असोज ३० गते राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेको हो । र भदौ १, २०७५ बाट कार्यान्यवयनमा आएको हो । यो एकवर्ष हाम्रा चिकित्सक मीत्रहरु निद्रामा हुनुहुन्थ्यो यो भन्दिन ।
तर, यर्थाथ, के हो भने अहिले चिकित्सहरु प्रयोजित भएको हो कि, भन्ने आशंका भने गर्न सकिन्छ । उहाँहरुलाई केपी ओली र राम बहादुर थापाको पाइलो गन्हाउँछ । यसमा मलजल पश्चिमतिरका हरुको गरिरहेका हुन भन्दा फरक नपर्ला । किन कि यहाँ विगतमा पनि बहुमतको सरकारका गन्हाएका हुन् । विगतमा आफ्नैले खुट्टा काट्दा सबैलाई हाइसन्चो हुन्थ्यो । अहिले त्यो सम्भव भएन अनि डा. साहबहरु कहिले जुम्ला पुगेर संग्राम गर्नुहुन्छ त कहिले काठमाडौंमै बिरामीको विचल्ली बनाएर मार्चपासमा लाग्नुहुन्छ ।
हाम्रा महान चिकित्सिकहरुलाई थाहा छ, यो संहिता नराम्रो कामगर्नेहरुका लागि मात्र हो । आम चिकित्सकहरुका लागि होइन । यति थाहाँ हुँदा हुँदै पनि चिकित्सक मीत्रहरु अबुझ जस्तो बनेको देखिन्छ । उहाँहरुलाई यी संहिताका कारण साच्चीकै कामगर्न नसकिएको भए उहाँहरुले सक्कली प्रमाणपत्र बुझाइ सक्नुहुन्थ्यो । तर, अहिले प्रतिलिपि बुझाउने उहाँहरु बुझेर पनि बुझपचाएको अभिनय गरिरहनु भएको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । र, यो खाली राजनीति गर्ने र रिमोट कन्ट्रोल थिच्नेहरुको इसारामा नाटक गर्नमात्र चालिएको कदम हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । अहिले नेपाल चिकित्सक संघ, सुद्ध चिकित्सकहरुको संगठन होइन एटा पार्टीको भगिनी संगठन जस्तै भएको छ । र यसले राजनीतिक स्पेस मात्रै खोजिरहेको छ ।
संसोधनमा मुलुकी ऐन
मुलुकी ऐन विगतमा पटक–पटक संसोधन भएको छ । विं.स २०२० मा यसको व्यापक संशोधन भएको हो । बिं.स २०५८ मा गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको कार्यदलले व्यापक मस्यौदा बनाएर प्रकाशन गरेको थियो । यसमा व्यापक छलफल भएको थियो । वि.स ०५७ मा यसले संसद्मा प्रवेश पायो । त्यतिबेला सरोकारवालाहरुसँग छलफल चलाइए पनि अहिले उठाइएका विषयमा चिकित्सहरु मौन बस्नु भयो या बोल्दै बोल्नु भएन । तर, अहिले एक्कासी चिकित्सक मीत्रहरु सपनाबाट ब्युँझिए जसरी झल्यास्स भएजस्तो गर्नु चिकित्सकीय मर्यादा अनुकुल पटक्कै छैन ।
डा. ले लापरवाही गर्छन, कल्पनै नगरौं
हो, म फेरि दोहो¥याउन चाहान्छु चिकित्सहरुले उपचारमा लापरवाही गर्दै गर्नुहुन्न । विरामीको उपचारमा उहाँहरुले बदनियत राख्दै राख्नुहुन्न । चिकित्सक मीत्रहरुले बदनियत राखेर, लापरवाहीपूर्ण तरिकाले उपचार गर्नुहुन्न । यतातिर कसैले सोच्दै नसोचौं । तर, लाखौ, हजारौं र सयौमा कसैले यस्तो गर्यो भने कारबाहीको भागिदार त बन्नु पर्ला नि ! पेसालाई अमर्यादित बनाउनेलाई कारबाही त हुनु पर्ला नि । त्यस्तो बेला दण्ड सजाय त हुनै पर्यो ।
परिवर्तनको लागि विवेकशीलता
अप्रिल १५ भित्रैमा ट्याक्स फाइलिङ्ग गर्नु उत्तम
पत्रकार बाबुराम ढकाल भन्छन् भन्छन् –कृषि उद्यमीका लागि अर्को पीडाको खबर
शाखा अधिकृतको तयारीमा रहेकाहरुलाई ज्ञवालीका सफलताका टिप्सहरु
शहीद रत्न कुमार वान्तवालाई सम्झदा
नेतृत्वको आचरण शुद्धिमा खिमलाल देवकोटाको जोड